Micrometer: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato aaladdan | Qalab bilaash ah
Inkasta oo ay u ekaan karto halbeeg dherer ah, at micrometer waxaan u jeednaa halkan waa aaladda sidaas loo magacaabay. Waxaa kaloo loo yaqaan qiyaasta timirta, waxayna u noqon kartaa aalad aan laga maarmi karin qof kasta aqoon isweydaarsi sameeyaha ama kuwa xamaasadda u leh DIY, maadaama ay u oggolaaneyso in si sax ah loo cabbiro waxa aaladaha kale aysan awoodin.
Maqaalkaan wax yar ayaad ka baran doontaa maxay tahay, maxaa loogu talagalay, sida ay u shaqayso, iyo sidoo kale furayaasha doorashada mid wanaagsan mashaariicdaada mustaqbalka ...
1 Waa maxay micrometer?
1.2 Qaybo ka mid ah micrometerka
1.3 Sidee micrometer -ka ama khamiirku u shaqeeyaa
2 Meesha laga iibsado micrometer
Waa maxay micrometer?
El micrometer, ama Palmer caliper, waa aalad cabbir oo aad u sax ah. Sida magaceedu tilmaamayo, waxaa loo adeegsadaa in lagu cabbiro walxaha cabbir aad u yar oo leh saxnaan weyn. Guud ahaan, waxay u muuqdaan inay leeyihiin khalad ugu yar, iyagoo awood u leh inay cabiraan xitaa ilaa boqol meelood (0,01 mm) ama kumanyaal (0,001 mm) milimitir.
Muuqiisu wax badan ayuu ku xasuusin doonaa a caliper vernier ama qiyaas caadi ah. Dhab ahaantii, habka ay u shaqayso aad bay isugu eg tahay. Isticmaal boorso leh cabbir qalin -jabiyay oo loo isticmaali doono si loo go'aamiyo cabbirka. Aaladahaasi waxay taabtaan cidhifka shayga si loo cabbiro, oo markaad eegto cabbirkiisa waxaad heli doontaa natiijada cabbirka. Dabcan, waxay leedahay ugu yaraan iyo ugu badnaan, guud ahaan waa 0-25 mm, in kasta oo ay jiraan kuwa waaweyn.
cunt warshadayntaGaar ahaan xilligii Kacaankii Warshadaha, xiise weyn oo loo qabay in wax lagu cabiro ayaa si hufan u bilaabmay. Qalabkii wakhtigaas la adeegsan jiray, sida cabbirrada caadiga ah, ama mitirrada, kuma filnayn.
Silsilado taxane ah oo la soo dhaafay, sida fur micrometer of William Gascoigne ee 1640, waxay keeneen horumarin loogu tala galay vernier ama vernier loo adeegsaday khaliirada wakhtiga. Astronomy -ku wuxuu ka mid ahaa qaybaha ugu horreeya ee lagu dabaqi doono, si loo qiyaaso masaafada si toos ah telescope.
Mar dambe ayaa iman doona wax -ka -beddel iyo hagaajin kale oo ah qalabkan. Sida Faransiiska Jean laurent Palmer, kuwaas oo 1848, dhisay horumarkii ugu horreeyey ee micrometer -ka gacanta. Hal -abuurka waxaa lagu soo bandhigay Paris 1867 -kii, halkaas oo ay ku soo jiidan lahayd dareenka Joseph Brown iyo Lucius Sharpe (oo ka tirsan BRown & Sharpe), oo bilaabay inay u soo saaraan sidii qalab badan 1868kii.
Dhacdadani waxay u fududeysay shaqaalaha aqoon -isweydaarsiyada inay yeeshaan aalad aad uga saxsan kuwii hore. Laakiin ma noqon doonto ilaa 1890, markii ganacsadaha Mareykanka iyo hal -abuure Laroy Sunderland Starrett waxay cusboonaysiisay micrometer -ka waxayna samaysay patent qaab hadda ka sii badan. Intaa waxaa dheer, wuxuu aasaasay shirkadda Starrett, oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn soo saarayaasha qalabka cabbirka maanta.
Qaybo ka mid ah micrometerka
Sawirka kore waxaad ku arki kartaa qaybaha ugu muhiimsan ee Palmer caliper ama micrometer. Yihiin partes Waxay yihiin:
1. Jirka: waa gabal macdan ah oo ka kooban jir. Waxaa laga abuuray maaddo aan aad ugu kala duwanayn isbeddelada kuleylka, taas oo ah, ballaarinta iyo foosha, maadaama ay tani sababi karto in la qaado cabbirrada khaldan.
2. Tope: waa midka go'aamin doona 0 ee cabbirka. Waxaa muhiim ah in laga sameeyay walxo adag, sida birta, si looga hortago duugga iyo jeexitaanka waxayna beddeli kartaa cabbirka.
3. Kala daadasho: waa curiyaha guurguura oo go'aamin doona cabirka micrometerka. Kani wuxuu noqon doonaa midka dhaqaaqaya markaad jebiso bareeraha ilaa uu taabto qaybta. Taasi waa, masaafada u dhexeysa sare iyo kororka ayaa noqon doonta qiyaasta. Sidoo kale, waxaa sidoo kale laga sameeyaa wax la mid ah kan kore.
4. Kaydinta kabaalka.
5. Jiirka: Waa qayb xaddidi doonta xoogga la sameeyo marka la samaynayo cabbirka xiriirka. Si fudud ayaa loo hagaajin karaa.
6. Durbaan guurguura: Halkaan ayaa ah meesha lagu qoro qiyaasta ugu saxsan ee qiyaasta, tobanaan mm. Kuwa leh wax -qabad ayaa sidoo kale yeelan doona cabbir labaad oo kale oo si sax ah, xitaa kumanaan milimitir.
7. Durbaan go'an: waa halka lagu calaamadeeyay miisaanka go'an. Layn kasta waa milimitir, waxayna ku xiran tahay meesha durbaanka go'an uu calaamadeeyo, taasi waxay noqon doontaa qiyaasta.
Sidee micrometer -ka ama khamiirku u shaqeeyaa
Micrometer -ka ayaa leh mabda 'fudud. Waxay ku salaysan tahay a fur si aad u beddesho barokacayaasha yaryar cabbir sax ah oo ay ugu mahadcelinayaan baaxadeeda. Isticmaalaha aaladda noocan ahi waxay awoodi doontaa inay dunta furto ilaa talooyinka cabbirku ay xiriir la sameeyaan dusha shayga si loo cabbiro.
Markaad fiiriso calaamadaha durbaanka qalin jabiyay, qiyaasta waa la go'aamin karaa. Intaa waxaa dheer, in badan oo ka mid ah micrometer -yada waxaa ka mid ah a vernier, kaas oo u oggolaan doona akhrinta cabbiraadaha jajabyada iyada oo ay ugu wacan tahay ku daridda cabbir yar.
Dabcan, si ka duwan caliper -ka caadiga ah ama khafiifka, cabbirrada kaliya ee Palmer dhexroor ka baxsan ama dherer. Waxaad horey u ogtahay in cabirka caadiga ah uu sidoo kale awood u leeyahay inuu cabbiro dhexroorka dhexdiisa, iyo xitaa qoto dheer ... Si kastaba ha ahaatee, sida aad ku arki doonto qeybta xigta, waxaa jira noocyo qaar oo tan xallin kara.
Waxaa jira dhowr noocyada micrometer. Iyada oo ku xidhan habka akhriska, waxay noqon karaan:
digital: waxay yihiin kuwo elektaroonik ah, oo leh shaashad LCD ah halkaas oo wax -akhriska lagu muujiyo si sahal loo helo.
Waxa kale oo loo qaybin karaa laba sida waafaqsan nooca cutubyada shaqaalaysiiyay:
Nidaamka tobanlaha: waxay adeegsadaan cutubyada SI, taas oo ah, nidaamka mitirka, oo leh milimitir ama submultiples.
Nidaamka Saxon: u isticmaal injiin saldhig ahaan.
Marka loo eego waxay cabbiraan, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa micrometer -ka sida:
Estándar: waa kuwa cabbira dhererka ama dhexroorka qaybaha.
Qoto dheer: waa nooc gaar ah oo leh kaalmo leh laba joogsi ama saldhig dushiisa dul saaran. In kasta oo kor -u -kaca uu si toos ah ugu soo baxayo saldhigga si uu u taabto xagga hoose sidaasna si qoto -dheer u cabbiro si sax ah.
Gudaha: Waxa kale oo lagu beddelaa laba xabbadood oo xiriir ah si loo cabbiro masaafadaha ama dhexroorka gudaha si sax ah, sida gudaha tuubada, iwm.
Waxa kale oo jira siyaabo kale oo loo maro iyaga buugga, laakiin kuwani waa kuwa ugu muhiimsan.
Meesha laga iibsado micrometer
Haddii aad rabto iibso micrometer tayo leh oo sax ah, halkan waxaa ah talooyin laga yaabo inay ku xiiso geliyaan:
Analog Proster micrometer ka baxsan (0-25 mm oo leh qalinjabinta 0.1 mm).
Beslands digital micrometer (0-25mm oo leh qalinjabinta 0.001mm) oo leh bandhig LCD.
Wax alaab ah lama helin..
Mitutoyo MT128-101 Micrometer Qoto Analog (0-25mm).
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » General » Micrometer: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato aaladdan
Saxanka furka birlabka: aalad aan la aqoon oo la taaban karo